AungYeKhant — TIIDE
Home › AungYeKhant › Comments
tcp က connection-oriented protocol ပါ။ udp က​တော့ connection-oriented protocol မဟုတ်​ပါဘူး။ connection-oriented ဆိုတာက​တော့ host တစ်​ခု နဲ့ တစ်​ခု data ​တွေ​ပေးပို့ကြတဲ့ အချိန်​မှှာ reliable connection ကို provide လုပ်​တဲသ​ဘောပါ။ tcp ကိုသုံးပြ…
in What is the difference of UDP & TCP Comment by AungYeKhant June 2018
-Telnet use tcp23 -SSH use tcp22 -FTP use tcp 20,21 -DNS use tcp 53 and udp 53 -DHCP use udp 67 and 68 -SMTP use tcp 25 -POP3 use tcp 110 -https use tcp 443 -POP3S use tcp 995 I know RIP version 1 and version 2. I have been studi…
in အသုံးများသော TCP, UDP ports များ Comment by AungYeKhant June 2018
Good Job Brother...
in What is Git? Comment by AungYeKhant May 2018
Ok Sir Thanks for all
in Window Server Core က​ေန Window Server GUI သို႔​ေျပာင္​းလဲျခင္​း Comment by AungYeKhant May 2018
Window Server Core က​နေ Window Server GUI ကို ​ပြောင်​းခြင်​းသည်​ low-maintenance environment ဖြစ်​ခြင်​း​ဆိုတဲ့ အ​ကြောင်​းပြချက်​တစ်​ခုတည်​းလား ခင်​ဗျ အခြားအ​ကြောင်​းပြချက်​​တွေများရှိလားဗျ။ powershell ဆိုတာ window မှာပါတဲ့ CMD နဲ့ တူတဲ့ ပုံစံလားဗျ
ok thanks all Sir
in What is Ubuntu???? Comment by AungYeKhant May 2018
CU MDY Final မှ ကို​အောင်​မြင်​့မြတ်​၊ ကိုဗညားနိုင်​ နဲ့ ကိုပြည်​့ဖြိုး​မောင်​ တို့ ကလည်​း ​ကျောင်​းမှာ ubuntu ကို သုံး​နေသူ​တွေပါ။ အကယ်​၍ အကူအညီ တစ်​စုံတစ်​ရာ လိုအပ်​ပါက သူတို့ကို ​မေးမြန်​းနိုင်​ပါတယ်​။